Samsam waa la soo dayn rabaa !!
Ducaale Hadal Wanaaje
Waad salaamantihiin saaxiibada webka iyo netka.
Dawladdda ka jawaabta baaqyada ama se codsiyada ay dadkeedu u soo jeediyaan waxa ay ka tarjumaysaa in ay tahay Dawlad ku dhisan dimoqraadiyad oo uu ka dhaxeeyo iyada iyo dadkeeda kalsooni, rabitaan iyo xidhiidh dhaw.
waxa lagu gartaa marka ay dhego furan ku maqasho dadkii xilka u dhiibtay iyada oo siinaysa ahmiyada tixgelinta ay ka mudan yihiin dadwaynaheedu oo aan kala sooc lahayn mid yar iyo mid weyn.Mid mas'uul ah ama mid caadi ah.
Arrinta ku saabsan gabadha yar ee Samsan Axmed Ducaale oo ay dad fara badani ka hadleen arrinta loo haysto iyo aragtiyaha kala duwan ee uu qof waliba ka qabo sida ay ugu muuqato ama uu farta ugu fiiqay in ay xukuumadda JSL ku geftay oo ay ku xadgudubtay xuquuq ay lahayd Samsam Ducaale ayaa ugu danbayntii waxa na soo gaarahaya jawaabo lagu kalsoon yahay, in dhawaan la soo afjari doono qadiyadda gabadha yar si dhaqso ah. Taas oo ka dhalatay, iyada oo ku mahadsan, ka dib markii ay xukuumadda JSL aqbashay codsiyo fara badan oo ay u soo jeediyeen bulshada gudaha iyo debeda ku nool ee reer Somaliland.
Samsam xoriyadeeda ayaa loo sii dayn doonaa iyada oo aanu jirin wax xuquuq ah oo ay leedahay oo laga duudsiyay.
Samsam waxa ay soo baxaysaa iyada oo shahaadadeeda gacanta ku wadata in ay tahay ceeb ka saliim wax loo geystay na uu san jirin. Shahaadad maragmuujin ah ayay ka wadata dhakhaatir caalami ah oo ay iyada iyo dadkeedu keensadeen sida ay ku qanacsan yihiin fara gelin la'aan wax kasta oo soo gadhay ka dib markii ay dad badan oo aan waxba hubsan ay guudka ka saareen waxyaalo sharaf dhac ku ah Samsam in loo aaneeyo ( Kufsi iyo jir dil mid na ma qabto Samsam laakiin wax kale ayay qabtaa oo Boossaaso looga soo dhiibay - Fal iyo Sixir ).
Arrinta Samsam waxa ay noqotay wax ah, ka dar oo dibi dhal. Kolley gabadha arrinkeedu ash ma aha!!
Arrinta Samsam waxa hadda waxii ka danbeeya loo wareejin doonaa dhinaca odayaasha iyo madax-dhaqameedka JSL bal si ay u furdaamiyaan hawsha isku raranta ah ee meesha laga sheegahayo.
Waxa la caddayn hayaa in dhammaan wixii ka dhacay meesha ay tuurta u riteen dadka ay ka soo jeedo Samsam ee kala jooga magaalada Boossaaso iyo Hargaysa. Samsam waxa ay wadatay oo ay sidataya Fal iyo Sixir. Waa mid kaba sii daran sheekadii hore. Sidee baa loo rumaysan karayaa waxaas oo war ah?. Way adkaan lahay in la rumaysto haddii aysan jirin dadka ay ka soo jeedo Samsam oo iyaku sidaas isku qirahaya. Iyaka ayaa la sheegayaa in ay xattaa ka danbeeyeen war gelinta ciidanka CID iyo ciidanka ilaalada guriga M/k/xigeenka.
Waxa ka sii yaab badan taariikh hore u dhacday 1960kii oo lala xiriirin hayo dhacdadan iyada ah magaalada Hargaysa in sidan oo kale loo waayay gabadh reer Bossasod ah lagu na war helay ka dib markii maalin maalmaha ka mid ah ciidan fara badan oo ay dawladdii berigaas ( AAdan Caddae iyo Cabirazaaq X. Xuseen ay madaxda ka ahaa yeen ) lagu soo daayay magaalada Hargaysa dhexdeeda ciidankaas oo ku qaylinahayay " Dadkiiyow Farfariista ..... Gabar yar ayaa fakatay oo la fiir-fiirin hayaa..... Farfariista....... Farfariista iwm ." Magaalo idil oo dadkeedii suuqa joogay la leeyahay wada far-fariista " ayay ahayd.
Waxa hadaba markan lala sii yaaban yahay oo la isweydiin hayaa, Maxaa mar kasta oo nin u dhashay gobolka majeerteeniya uu madax ka noqdo Somalia loo maqla hayaa sheekooyinka ku saabsan gabdhaha yar yar oo weliba ay sheekooyinku u gaarahayaan meel aad u sareeysa oo si weyn u baahsan iyada oo aad moodo in loogu talo galay sidii wax qorshaysan. Maxaayeelay sheekada laga soo tebinayo Samsam meeqo joor ayay maalin walba ka dhacdaa dhulka Somaliyeed iyo weliba Boossaaso gudaheeda oo ay ka mid tahay tii ay weliba u dhumatay tacaddigii loo geystay hiilka Samsam . Miss Mako Cige oo aan laba Cali is-weydiin cid ka hadashay iyo cid ka samaysay buuq iyo qaylo iyo boggaga saxaafadda oo buuxsama mid na uusan jirin.
Calaa-kulli-xaal Samsam Yaray iyo ninkii la xirnaa Mr. Cumar Xaaji Jamac Warsame way ina hayaan iyaka oo nabad qabta, laakiin dadkii soo shirqoolay Samsam - kuwii ceebaystay iyo Madaxdii JSL ee loo gefay iyo weliba Qoraaga qallinka dhumucda weyn ku difaacda qarankooda sida Prof. Farax Cali Jamac ( Ottawa ) iyo Dr. Diridhabe ( Karachi Pakistan ) dhammaan waxa ay ka dhur-sugahayaan oo ay dhawrahayaan waxa ay ka tiraahdo Caddaaladda Somalidu
Waxa kale oo la dhawrahayaa waxa ay ka tiraahdo caddaaladda Somalidu iyo ururada xuquuqul al- insaanku arrinta naxdinta leh ee loo geystay Marxuumad Mako Cige iyo raggii lagu dilay ama lagu xirxiray Boosaaso ee u dhashay JSL sheekada Samsam darteed. Haddii aysan qisado la mid ahayd middi dhacday 11 Sep.2001 ee lagu xalaashaday la dagaalanka argagaxisda caalamka.